Ukuhamba kweVenus: kuyini, izici nokuthi ungakubona kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunemicimbi yezinkanyezi eyenzeka njalo emakhulwini eminyaka. Enye yazo ukuhamba kweVenus. Yinto yezinkanyezi eyenzeke izikhathi eziyi-7 kuphela selokhu kwasungulwa isibonakude. Kwenzeka ngeminyaka ka-1631, 1639, 1761, 1769, 1874, 1882 nango-2004. Isikhathi sokugcina ukubonwa kwaba ngoJuni 6, 2012. Kumayelana nokuhamba kweVenus kusika i-solar disk.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi ukuhamba kweVenus kumayelana nokuthi yiziphi izici zayo kanye nokufunayo.
1 Kuyini ukuhamba kweVenus
2 Ukuhamba kweVenus nge-disk yelanga
3 Ungayibuka kanjani
Kuyini ukuhamba kweVenus
Ukuhamba kweVenus sikubiza ngendawo ebonakalayo yaleplanethi phambi kwediski yelanga. Ukusuka emhlabathini ungabona kuphela ukuhamba kwalabo amaplanethi angaphakathi emzileni wayo. Isibonelo, ukuhamba kweMercury ngesilinganiso Izikhathi eziyi-13 ngekhulu leminyaka kanye neleVenus ngesilinganiso se-13 ngeminyaka eyinkulungwane. Uma imijikelezo yamanye amaplanethi afana neMercury, iVenus noMhlaba iyindiza efanayo, ukuhamba kwezinto ezimbili zokuqala bekungaba njalo kakhulu. Noma kunjalo, akunjalo. Iqiniso lokuba kumazinga ahlukene we-orbit, yenza ukuhlangana kungabi njalo. Kwesinye isikhathi ungabona ukuthi ezokuthutha zinikeza iplanethi ukubonga ukuwela kwamadiski.
Ngokombono womhlaba, iMercury neVenus bangangena esihlanganisweni esiphansi futhi bangangeni kudiski elanga, kepha badlule eningizimu enhle yasenyakatho yenkanyezi. Siyakwazi lokho I-orbit kaMercury ithambekele ku-7 ° maqondana noMhlaba, naleyo yeVenus ka-3,4 °. Ngalezi zimo ze-orbit ezisunguliwe, kufanele sazi ukuthi yiziphi izimo ezibangela ukuhamba. Ukuhlangana okuphansi kweplanethi yangaphakathi kwenzeka lapho ikenye yezindawo zokuzungeza ze-orbital. Ngale ndlela, lawo maphuzu we-orbit yiwo anqamula indiza yomjikelezo weplanethi yethu. Kulesi simo kuphela, ilanga neplanethi yoMhlaba cishe kulayini oqondile futhi kungenzeka ukubona ukudlula kweplanethi phambi kwediski yelanga.
Ukuhamba kokugcina kwe-mercury kungabonakala ku-2016, ngenkathi ukuthuthwa kweVenus kudingeke kudlule isikhathi esingaphezu kwekhulu ukubonwa. Ukuhamba okulandelayo kwale planethi kuzokwenzeka ngaphezu kwekhulu leminyaka ngemuva kwezinkampani ezikude ezifana Disemba 10, 2117 noDisemba 8, 2125.
Ukuhamba kweVenus nge-disk yelanga
Ukuhamba kweVenus phambi kwediski yelanga kumangalisa kakhulu kunalokho kweMercury. Lokhu kungenxa yokuthi ububanzi obubonakalayo bukhulu kakhulu ngenxa yokusondela kweplanethi yethu. Siyazi ukuthi idiski yeVenus ingu-61 ″ ububanzi (1/30 wobubanzi belanga) inkulu ngokuphindwe kahlanu kune-disk yeMercury, efinyelela ku-12 only kuphela. Lona umbono ovela kwiplanethi yethu.
Lokhu kuhamba kwenzeka ezinsukwini zokuqala zikaJuni nangoDisemba lapho ilanga litholakala ngaphansi kuka-1 ° 45 'ukusuka endaweni engezansi futhi iplanethi ifinyelela ekuhlanganeni kwayo okuphansi kakhulu. Izazi zezinkanyezi zichaze lolu hlobo lwesimo njengesimo esingavamile futhi senzeka kuphela phakathi kosuku noma izinsuku ezimbili ezinsukwini lapho iplanethi yethu idlula khona kuma-node. Siyazi futhi ukuthi zenzeka ngezikhathi ezijwayelekile futhi njalo phakathi neminyaka engama-243.
Sizobona ukuthi yiziphi izenzakalo ezinkulu ezenzeka ngesikhathi sokuhamba kweVenus ukugqamisa ukubaluleka kwalesi senzakalo:
Oxhumana naye wokuqala: Kulokhu kuxhumana naye kokuqala, idiski kufanele libonakale lithinta idiski yelanga. Lokhu kungukuqala kokuhamba futhi kamuva kungabonwa ukuthi kwethulwa kanjani kuwo. Lokhu siyazi ukuthi akunjalo ngokuphelele, kepha ukubukeka okubonakalayo.
Oxhumana naye wesibili: Kuyingxenye yalesi simo lapho idiski yeVenus i-tangent ngaphakathi kwediski yelanga. Siyabona ukuthi iphuzu elimnyama lihamba ilanga ngokunyakaza okulinganayo okufanayo. Okuningi noma ngaphansi ungalinganisela ijubane lemizuzu engaba ngu-4 ye-arc ngehora. Ukuhamba phakathi kwalabo oxhumana nabo kungathatha amahora ambalwa.
Oxhumana naye wesithathu: Yilapho idiski yeVenus ithinta onqenqemeni lwediski elanga.
Oxhumana Naye Abane: kungukuphela kokuhamba kweVenus. Kule ngxenye yokuhamba, ama-disc ahlangana nezimpawu zangaphandle.
Kungashiwo ukuthi oxhumana nabo ababili bokuqala bachazwa njengesigaba sokufaka kanti abokugcina babhekwa njengesisekelo sokukhiphayo.
Lokhu kuhamba kokugcina kwenzeka eminyakeni engaphezu kwengu-8 eyedlule, kodwa imibandela ethile bekufanele ihlangatshezwe ukuze ikubone kahle. Ihlale amahora ayisithupha nemizuzu engu-6 futhi yenzeke phakathi kuka-12: 22 ntambama no-09: 04 ekuseni ngo-UT (amahora amabili ngaphezulu wesikhathi se-peninsular yaseSpain), ngakho-ke kwakungabonakali kakhulu kusuka ezingxenyeni zethu. ESpain engxenyeni yesifundazwe kwakudingeka bathuthele enyakatho ngangokunokwenzeka nasezindaweni eziphakeme ezinokukhanya okucacile futhi okucacile empumalanga. Khumbula ukuthi idiski yelanga isuka nokuhamba ngezikhathi zayo zokugcina. Lezi zikhathi zokugcina ukuxhumana okwesithathu nokwesine. Lokhu kubangela ukuthi ukuphakama kwelanga emhlabathini kuneziqu ezimbalwa.
Kungabonakala endaweni enhle ukuthi Kwakungogu lwaseGirona olunombono oqondile wolwandle esendaweni lapho kuphuma khona ilanga. Indawo ekahle yokuyibuka enhlonhlweni isendaweni ephakeme ogwini lwaseGirona ngokubuka okuqondile kolwandle lapho kuzophuma khona iLanga. Usayizi weVenus obonwe eMhlabeni ngesikhathi sokuhlangana okuphansi cishe ungama-60 ″, noma u-3 % usayizi we-angular weLanga, owanele ukukwazi ukukubona ngaphandle kwesidingo sedivayisi ebonakalayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuhamba kweVenus nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ukuhamba kweVenus